Entrepreneurial गतिविधिको विषयहरु। यस अवधारणा बुझाउँछ
entrepreneurial गतिविधि प्रजा, रूसी कानून अनुसार, दुवै व्यक्तिगत नागरिक र सम्पूर्ण व्यावसायिक कम्पनीहरु कानुनी व्यक्तित्व संग, हुन सक्छ। साथै, रूस मा व्यापार, बाहिर विदेशी अमेरिका, व्यक्ति को बासिन्दा नागरिकता बिना विदेशी लगानी संलग्न कम्पनीहरु ले, साथै।
बहुमत को उमेर पुगेको छ जो कुनै पनि रूसी नागरिक सम्पत्ति स्वामित्व र यो, आफ्नो एकमात्र विवेकमा, संगठन को सबै किसिमका सिर्जना गर्न, पाठ्यक्रम निपटान र, entrepreneurial गतिविधिमा संलग्न सही छ।
नोट नागरिक, एक व्यापार एकाइ रूपमा व्यापार गर्लान् भन्ने तथ्यलाई छ, एकै समयमा हुनुको बिना कानुनी संस्थाहरू र बस रूपमा दर्ता निजी उद्यमीहरू। व्यापारिक संस्थाहरूको, अनुसार नै कानून संग आफ्नो गतिविधिहरु पूरा आफ्नो स्थिति, बिना। निर्मित बिना व्यापार मा संलग्न छन् जो नागरिक, यो मामला मा, कानुनी निकाय साना व्यवसायहरू द्वारा उल्लेख।
स्थिति को उद्यमी commits प्राप्त उहाँलाई एक प्राकृतिक व्यक्ति गर्न भालु पूर्ण जिम्मेवारी लागि आफ्नो ऋण गर्न राज्य बजेट र निजी लेनदारों। असमर्थ लेनदारों आफ्नो ऋण तिर्नको लागि, हो जो कारण लागि गर्नेहरूलाई नागरिक, एक अदालतले निर्णय को आधारमा दिवालिया घोषणा हुन सक्छ। यो प्रक्रिया पछि, तिनीहरूले उद्यमी को आफ्नो स्थिति गुमाउन। व्यक्ति को सम्पत्ति को लेनदारों फिर्ता ऋण दिवालिया घोषणा र एक निश्चित अनुक्रम मा जम्मा गर्न सेवा गरे। पहिलो स्थानमा, छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा रूपमा साथै जीवन र नागरिक को स्वास्थ्य गर्न हानि, कारण सँग सम्बन्धित ऋण तिर्न।
एक व्यापार एकाइ, केही व्यक्तिहरूलाई लागि बाहेक, अक्सर सबै कार्यहरू आफ्नो काम को परिणाम देखि एक लाभ बनाउन उद्देश्य छन् व्यावसायिक कम्पनीहरु सेवा। त्यहाँ को निम्न प्रकारका छन् व्यावसायिक गतिविधि :
सामान्य भागीदारी र सीमित भागीदारी: भागीदारी को प्रकार द्वारा।
को प्रकार द्वारा संयुक्त स्टक कम्पनीहरु,: कम्पनीहरु अतिरिक्त जिम्मेवारी र सीमित दायित्व कम्पनीहरु संग। संयुक्त-स्टक कम्पनीहरु खुला र बन्द दुवै हुन सक्छ।
साथै, त्यहाँ पनि छोराछोरीलाई उत्पादन, आधार संरचना को एक निरंतरता छन् र यो देखि आधारमा जो छन्। लागि व्यावसायिक संगठनहरू समावेश, साथै, सहकारी उद्यम, राज्य र नगरपालिका संस्थाहरु।
कानुनी निकाय यसको गतिविधिहरु देखि लाभ को निकासी मा लगे छैन, मुनाफा भनिन्छ रूपमा, ती संगठनहरूको। यस प्रकारको को संगठन उपभोक्ता सहकारी, धार्मिक वा सामाजिक संगतले, को दान सञ्चालित समावेश गर्नुहोस्।
(अर्को विकल्प - परिचालन व्यवस्थापनमा) तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्व वा आर्थिक व्यवस्थापनमा या त एक सम्पत्ति छ भने व्यापारिक संस्थाहरूको, कानुनी व्यक्तिको पहिचान हुन सक्छ। कानूनी व्यक्ति चार कानुनी सुविधाहरू छ:
आफ्नो तर्फबाट अदालत कार्यवाही बोल्न मौका।
स्वतन्त्र वित्तीय दायित्व।
निष्कर्षमा, यो को अवधारणाहरु बीच सीमाहरु कि उल्लेख गर्नुपर्छ शारीरिक र कानुनी व्यक्ति अक्सर मनपरी छन् र प्रत्येक मामला मा अवस्थित कानून को रूपरेखा परिभाषित छन्। उदाहरणका लागि, कुनै पनि "संगठन" को कानुनी निकाय को स्थिति को जिम्मेवारी कि होइन यो नाम एक नागरिक 'सामूहिक लुकाउँछ पछि। आर्थिक समाज, सिद्धांततः, सिर्जना र गर्न सक्छन् एक व्यक्ति, प्रासंगिक कागजातहरू को उचित कार्यान्वयन संग।
खुला अर्थात् कति छ?
रोमन पुटिन: फोटो, वैवाहिक स्थिति Romana Igorevicha Putina
बेलारुस को गणतन्त्र मा इन्टरनेट र कर को भुक्तानी देखि राजस्व सटही
प्रकार र उपकरण: लागि ससेज क्लिपर
आईपी के हो र किन यसलाई दर्ता गर्न आवश्यक छ?
शब्दहरू morphological विश्लेषण कसरी सञ्चालन गर्न
आफ्नो अनुहार आकार लागि घाम कसरी चयन गर्न। सुझाव साँचो fashionistas
एक प्रशासनिक ठेस को निर्णय अपील को अवधि, को वैधानिक
Pereslavl होटल। Pereslavl Pleshcheeva लेक मा सबै भन्दा राम्रो होटल: समीक्षा
चिकित्सा "Fortrans" के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ? एनालग अर्थ - दबाइ "Forlaks"